Mepee maka Azụmaahịa: ratelọ ọrụ ịde blọgụ | Martech Zone
N'ụtụtụ a, enwere m oge dị egwu na Meghee maka ngosi redio redio na Trey Pennington na Jay Handler, ma ndị ọkà okwu a rụzuru na ndị ndụmọdụ na-enyere ndị azụmaahịa aka iwere ya n'ọkwa ọzọ. N'ezie, isiokwu ahụ bụ Bloglọ ọrụ ịde blọgụ!
N'oge ihe nkiri, Dan Waldschmidt jụrụ ụfọdụ ajụjụ dị egwu m chọrọ ịkọrọ ebe ọ bụ na anyị enweghị ike ịkọwa ọtụtụ nkọwa na ihe nkiri ahụ:
Ọdịnaya dị ezigbo mkpa karịa njikarịcha. Kweta? Mba? - Azịza: Ee… mana. Ihe mere mụ na ndị ahịa ji eji oge dị ukwuu na njikarịcha bụ ijide n'aka na ha na-emejupụta ọdịnaya ha na-ede. Nchọpụta ọchụchọ dị mkpa n'ihi na ọ ga-ahụ na ọdịnaya ahụ ga-achọta na engines ọchụchọ. Ntughari ntụgharị dị mkpa n'ihi na ọ ga-enye ndị na - agụ akwụkwọ ụzọ ka ha gaa site n'ịgụ ọkwa blọgụ ka ị bụrụ onye ahịa ọhụrụ. Nnukwu ọdịnaya ga- merie wee nweta nsonaazụ gị; agbanyeghị, nnukwu njikarịcha ga-adọta ma gbanwee ndị ọbịa karịa n'ime ndị ahịa.
Kedu ihe bụ ndụmọdụ 4-5 dị elu maka ndị na-ede blọgụ? - Amalitela rue mgbe i ji n’aka na ị ga-arara ya nye ma napụta ya. Nke ahụ pụtara na ị nwere ụfọdụ isiokwu ịde blọgụ, ị na-ede ya oge niile, gị onwe gị akwụsịna. Emela ka ịghaghachi ngwa ahịa - zaa ajụjụ ndị atụmanya gị na ndị ahịa gị na-eche ma na-ajụ maka ya. Lelee nke gi zigara nchekwa maka ụfọdụ nnukwu ọdịnaya echiche. Gbaa mbọ hụ na ị nwere ụzọ gị na onye ahịa gị ga - esi banye miri emi - nke a bụ oku na - eme ihe n'akụkụ akụkụ ahụ na - egosi na peeji nke ọdịda na ozi kọntaktị ma ọ bụ nọmba ekwentị ịme azụmahịa. Ahapụla njikarịcha ọchụchọ gị na ohere - usoro ikpo okwu gị, isiokwu gị, yana ọdịnaya niile kwesịrị ka a rụọ ọrụ nke ọma ka igwe nchọta ọchụchọ nwere ike depụta ọdịnaya ahụ ma ị gbagoro na nsonaazụ ọchụchọ maka isiokwu ndị metụtara azụmahịa gị.
Gịnị banyere ịza ajụjụ ndị ha na-atụ ụjọ ịjụ? Nke ahụ bụ ezigbo echiche ndu… Eeh, ọ dị, ọ ga-achụpụ ikike. Ọtụtụ mmadụ na-eji ụda olu na-ede blọgụ ha. Esemokwu na ịkwụwa aka ọtọ ga-eme ka mkparịta ụka ma nye ndị na-agụ ya eziokwu na ị bụ onye eziokwu na onye mepere emepe. Nke a gụnyere ide ederede gbasara ọdịda gị dịka ihe ịga nke ọma gị. Anyị niile chọrọ ịrụ ọrụ na ndị dị adị ma anyị maara na anyị niile na-alụ ọgụ site n'oge ruo n'oge. Ghọta otu ụlọ ọrụ gị si emeri ọdịda nwere ike ime ka ị nwekwuo atụmanya azụmaahịa gị. Ime ihe n'eziokwu na-enye ume ọhụrụ na isiokwu siri ike ga-achụpụ ikike!
Gbanye na Meghee maka azụmahịa kwa ụtụtụ Satọde ọ bụla na 9AM EST. Daalụ Trey na Jay!
Tags: njikarịcha blognjikarịcha ọdịnayajay njikwameghee maka azụmahịaTrey Pennington
Ngosipụta Ngosipụta nke Ozi: Omniture vs Webtrends
Ndụmọdụ dị mma. Ọ bụ ihe na-akpali akpali ịnụ ka ị na-ekerịta ihe ọmụma gị.
Ọ na-ewute mmadụ ole na ole “enweta ya”. Jikwaa nnukwu ọrụ.
Ezitere na iPad m